UDUB IN AANU KA CARARNO DAN BAAN MOODNAY WAAYO WAXAY DOONAYAAN IN AANU ISDILNO MUSE BIXI | Toggaherer's Weblog
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi ayaa ku eedeeyey Xukuumada xisbiga UDUB inay bilaabeen arrimo ka dhan ah oo xumeynaya nabad-gelyada, Islamarkaana waxa uu si ba’an u naqdiyey qaabka ay u shaqeeyaan warbaahinta dawlladu.
Muddo kordhinta Lixda bilood ah ee Guurtidu u kordhisay Xukuumada Somaliland, ka hor waxa jiray olole laxaad-leh oo Xisbiyada KULMIYE iyo UDUB mid kastaa dhankiisa kaga dedaalayey in Guurtidu meel-mariso arragtidiisa, iyadoo midkoodna ku adkaa mudo kordhinta, ka kalena ka soo horjeeday.
Sidaa darteed Muuse Biixi waxa la weydiiyey sababta ay u diideen muddo kordhintu markii ay soo baxday. waxana uu sheegay in KULMIYE ahaan ay ogol-yihiin wixii sharciga iyo dastuurka dalku qabo, waxana uu ku celiyey in qaabka muddo kordhinta Lixda bilood ah loo maray ahayd mid ka baxsan sharciyadii dalka. “Golayaasha sharci dejintu waa dastuuri waana hay’addaha dalka ugu sareeya, waxaana ka sareeya oo kaliya Dastuurka. Shardigii kordhintu hadday dalka ka jirto oo ah in nabadgelyo darro jito, waanu ogolaaneynaa nabad-galyo darana dalka kama jirto..annagu gardiid ma nihin, bal gartaas cid waliba ha qaado.” Sidaas waxa yidhi Gudoomiye ku xigeenka KULMIYE oo u waramay shalay TV-ga madaxa-banaan ee Space-channal iyo Shabakada wararka ee Somalilandfure, waxaana uu intaa ku daray oo uu sheegay in haddii uu dastuurka waafaq-san-yahay ay taageeri lahaayeen. “Dastuurku maaha waxaan jecelahay, waa sharci sharcigaas haddii muddo kordhintu waafaqsantahay, xaalada dastuurku jideeyey in lagu kordhiyo lama diidayo, laakiin sharcigii ma waafaqsana, sidaa darteed ma aqoonsanayno.” Waxana uu intaa ku daray oo uu yidhi.
“In sharciyadii ka dhamaatay, oo uu yahay Madaxweyne sife sharci daro ah ku fadhiya. annaga oo qudha maahee, caalamka oo dhan ayaa og.”
Muuse Biixi ,waxa uu tilmaamay in aan dalka wax nabad-gelyo darro ahi ka jirin, hase ahaatee buu yidhi.. “Qoladda UDUB, saxaafadooda waxay u isticmaaleen, sidii tii Ruwaanda iyo Seerbiya…Abaabul dagaal ayay Xukuumaddu bilowday odayaal ayay soo fadhiisisaa TV-ga. 50 sanaddood wixii dalkan soo maray ee xumaan iyo dhibaato ahaa ee dadkani soo dhaafay ayey soo fadhaan,wax walba waa ay nagula kaceen. Waxaanu damacnay inaanu dadkayaga la haddalo,. Waxa dhacday in la yidhaahdo ma hadli kartaan, ,waxay isticmaaleen ciidankii qaranka ee ummadda u dhexeeyay waxay gaadhay heer ay rasaas ku furan taageerayaashadii ilaa gudoomiyaha xisbiga.
Waxaan filayaa inay noo arkaan rag ka baqaya oo ka cararay laakiin, baqdin ma’aha ee wax ka weyn baanu ilaalinaynaa oo tacab badani nagaga soo baxay kuwa aanu ka cararaynaa ma’aha kuwo tacab ka galay dalkan…..waxay gaadhsiiyeen meelo lama taabtaan ah ciidamadan naloo adeegsaday iyo rasaastan nalala dhacayna garteedu Somaliland bay u taalaa,in badan baa la yidhi KULMIYE nabad gelyo daruu wadaa,. In aanu baqano oo ka cararno anagaa dan moodnay waayo UDUB waxay doonayaan inaanu isa soo taagno oo is dilno markaa waa inaanu ka war-wareegno oo nidhaahno waaryaadha na daayaay nabad maanta dalka taala ma rabno in wax la yeelo ummadan dalka leh ee ganacsiga ku leh baa arkaysa in nala leeyahay waan ku xidhi oo xabad nalagula soo cararo oo nalagu ridayo,waad ogtihiin in Faysal Cali Wabaare Wajaale uu tagay oo xabad lagu soo riday anaga waad ka war qabtaan in ilaa gudoomiyihii xabad lagu riday oo maalintii dambena inan yar naloo soo diray oo isu soo baxayagii uu xabad ka riday waa la ogyahay markaa anagu waxaanu leenahay waar sidaa ka daayaay nabada nala qabtaay waxaanuna leenahay waar ninkani ma hagaagsana oo waad aragtaan inuu na leeyahay waan ku xidhi waan ku dili mar walba oo aanu ku nidhaahno umada wax u qabo’e, halanala qabto” Ayuu yidhi,
Muuse Biixi waxa kale oo su’aalaha la weydiiyey ka mid ahaa sida xisbi ahaan u arkaan dhexdhexaadin ay isu xil-qaameen urur-siyaasadeedka UDHIS, taasoo ay markii danbe ku dhawaaqeen in dhinaca xukuumadu ku gacan seydhay, waxana uu yidhi “Anagu mar walba waxaanu leenahay cid walba oo dhexdhexaadin ka gelaysa in la wada hadlo diyaar baamu u nahay”
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Kulmiye, waxa la weydiiyey oo kale arrimaha doorashada, waxaana uu ku doodey in ay xisbi ahaan diyaar u yihiin doorasho“Doorasho diyaar baanu u nahay laakiin meel nin diyaarsaday in lagula ciyaaro anagu ku ciyaarimayno balse waxaanu leenahay waar kubada dhexdaa inoo dhiga aynu hareeraha ka wada joogno markaa ka dibna aynu ku tartano” ayuu yidhi.